काठमाडौं । भारतीय एक चर्चित टेलिभिजनले आयोजना गरेको डान्स कम्पिटिसनमा नेपालकी तेरिया मगरले बाजी मारिन् । यो ठूलो सफलताका लागि उनलाई हार्दिक बधाई । हजारौं भारतीयलाई पछि पार्दै यति ठूलो सफलतामा हात पार्नु आफैंमा गौरवको विषय हो । नशा नशामा कला साहित्य बोकेका भारतीयलाई पछि पार्नु कम्ति चुनौति होइन । यति ठूलो कम्पिटिशनमा भाग लिएर त्यसको उपाधी चुमेर तेरियाले आफ्नो इज्जत त
यम बुद्ध, तिमीलाई श्रद्धाञ्जली !
डा. भोला रिजालको एउटा गीतको अंश छ, ‘कोही आउने कोही जाने रित हो...’ । पक्कै पनि गीतको यो अंशले भने जस्तै मान्छेको जिन्दगी क्षणभंगुर छ । जन्मिए पछि मर्नुपर्छ । आफ्ना आफन्त छोडेर जानैपर्छ । तर, पनि कहाँ मान्दोरहेछ र यो मन जव आफन्तले नै छाडेर जाँदोरहेछ । मृत्यु शास्वत सत्य छ । सवैले यसलाई वेहोर्नु नै पर्छ । न कोही यसबाट भाग्न सक्छ न कसैले छल्न । यहाँ नेर मलाई रामकृष्ण ढकालको
सगरमाथा जस्तै उचो !
भिन्न भिन्न कला साहित्य अनि संस्कृति हाम्रो पहिचान हो भने विभिधता हाम्रो विशेषता । क्षेत्रफलका हिसावले निकै सानो हाम्रो देश कला, साहित्य अनि संस्कृतिको नजरले भने हामी निकै ठूला छौं । त्यसैले त हाम्रो शिर सँधै सगरमाथा जस्तै उचो छ । यसैले पनि होला महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकाटाले लेखेका के नेपाल सानो छ रु यो निवन्धमा महाकवि देवकोटाको सार छ, हामी विश्व मानचित्रमा सानो छौं तर
सरकार हामीलाई रोयल्टी देऊ !
नेपालमा सांगीतिक इतिहासका सुरुआत भएको करिब सात दशक हुन लाग्यो । रेडियो नेपाल तत्कालीन नेपाल रेडियोको सुरुआतसँगै नेपालमा सांगीतिक सुरुआत भएको पाइन्छ । त्यसअघि भारतका विभिन्न राज्यमा गएर गीत गाएको पाइन्छ तर त्यो त्यती व्यावाहारिक थिएन भने सहज पनि । संगीतको शोख भएकाहरुले मात्र भारत गएर गीत गाउन सक्थे । भारत गएर नेपाली गीत गाउनु जति खर्चिलो थियो त्यती नै महत्वाकांक्षी पनि
पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा पनि नयाँ वर्ष मनाउने प्रचलन बढेर गएको छ । नेपाली नयाँ वर्ष भन्दा पनि अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने प्रचलन संस्कृतिकै रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । पाश्चात्य संस्कार, संस्कृति र शैली विस्तारै अवलम्बन हुन थालेको छ । विश्वव्यापी पहुँच भएका पाश्चात्य मुलुकका सञ्चार माध्यम र नेपाली डायस्पोरिक पपुलेशनको प्रवभाव नेपालमा पनि परेको देखिन्छ । राम्रो कुराको
टाउको माथि खुट्टा हुँदैन
कति काट्छौ कुराहरु अझै काट्दै गर । म त हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गर । अग्रज गायिका कुन्ति मोक्तानको सुरिलो स्वरमा सजिएको यो गीत हामी सानो छँदा नै हाम्रो जिव्रोमा झुण्डिएको थियो । राम्रो लाग्थ्यो । गाउँथ्यौं जानी नजानी । धेर थोर यसको अर्थ पनि थाहा थियो । तर, यसको गाम्भीर्यता भने भख्खर थाहा पाउँदैछु । समय सँगै उमेर बढ्यो । उमेर बढेसँगै संघर्ष सुरु भयो । संघर्षले केही